Ukuphupha ngeShieldwache ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neShieldwache. Nangona zininzi iindidi zamaphupha, ii-hypotheses malunga nentsingiselo yazo zahlukile ngokuxhomekeke kumxholo: Nazi ukutolikwa okuphambili kwamaphupha.
Ekuqaleni, umsebenzi womlindi yayikukukhusela izixhobo kunye namakhaka amajoni okanye amajoni. Ngengqondo ebanzi, iyaqondwa njengonogada oxhobileyo enkampini.
Umlindi wayengummeli wegunya likarhulumente kwaye wayevunyelwe ukusebenzisa umpu wakhe. Umsebenzi wabalindi wawungqongqo kakhulu. Kwakufuneka aphathe isixhobo sakhe ngawo onke amaxesha ngelixa esemsebenzini kwaye wayevunyelwe kuphela ukushiya isikhundla sakhe ngokwe-odolo ngokucacileyo. Ukongeza ekwenzeni ingxelo yaseburhulumenteni, bekungavumelekanga ukuba uthethe, utye okanye usele. Oku kuyinyani nanamhlanje koonogada baseBuckingham Palace eLondon, abanomtsalane kubakhenkethi kwiminqwazi yabo edumileyo yoboya.
Ukuba umlindi uvela ephupheni, iphupha elo umbona enxibe iyunifomu kumaxesha adlulileyo. Mhlawumbi ubandeka ngumkhenkce phambi kwendlu yoonogada kwaye ungasabeli kumazwi ephupha elo. Ukutolikwa kwamaphupha, iimpawu ezizezolu phawu lwephupha zibalulekile.
1 Uphawu lwephupha «uSentinel» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uSentinel» -Ukuchazwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «sentinel» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uSentinel» - Ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo yephupha, uphawu oluqinisekisayo luvela kuphawu lwephupha "uSentinel" the ulungelelwano ihlala igcinwe ixesha elide xa umntu ophuphayo elumkile kwaye emamele kwaye engazivumeli ukuba anqandwe. Umphuphi uya kuba nakho ukoyisa imiqobo kunye nokusombulula iingxaki.
Nangona kunjalo, umfanekiso wephupha unokutsalela ingqalelo kwinto yokuba ukungathembeki komntu othile kufanelekile. Ukuba uzibona ephupheni njengomthumeli, oku kunokuba sisalathiso kutoliko lwephupha njenge isithukuthezi kwaye uhlale uzolile kubomi bemihla ngemihla. Ukutshintshwa konogada ephupheni kubonisa ukujika okukufuphi.
Uphawu lwephupha «uSentinel» -Ukuchazwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yamaphupha, uphawu lwephupha "sentinel" lumele a umgca wokhuselo phakathi kwengqondo kunye el mundo Ingaphandle lobomi bamaphupha. Ungathanda ukuzikhusela ekonzakaleni ngokwenza ngathi akanankathalo. Iphupha liyasindiswa ngokuthatha umhlala-phantsi kwindima yomgcini-cwaka ezalisekisa umsebenzi wakhe wonxibelelwano. Ngokwenkcazo yephupha, ukungaqiniseki okusisiseko kwephupha ngokubhekisele kwindawo ekungqongileyo kunokuchazwa kwisimboli yephupha.
Ukutolikwa kwamaphupha, amakhaka ebekufanele ukuba agadwe ngaphambili abonisa, kwelinye icala, ukukhuselwa, kwelinye icala, ukuchongwa. Amanqaku okuthunyelwa njengophawu lwephupha kumkhuseli kwaye amandla. Ngokunokwenzeka umphuphi kubomi bokwenyani unemvakalelo yokuba kufuneka agcine umanyano kwaye akhusele abantu abamngqongileyo. Ngephupha, i-subconscious itsalela ingqalelo kwimfuno enokubakho egqithisileyo. Umpu, oyinxalenye yezixhobo zomthunywa, udlala indima ebalulekileyo ekutolikeni amaphupha njengophawu lwamandla.
Uphawu "Sentinel" lwephupha lunokuthintelwa ngocoselelo kule meko. Umphuphi ngokungazi uyaqonda ukuba kufuneka azigcine kulawulo lwezibongozo ezinobundlongondlongo kunye neminqweno.
Uphawu lwephupha «sentinel» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo, uphawu lwephupha "sentinel" luphawu lwe ukhuseleko ngokwengqondo, ngokwasemoyeni nangokwasemzimbeni. Umlindi uphawula inqaku elithile ekukhuleni kwengqondo ephupheni.
Ngokwenkcazo yephupha lokomoya, umfanekiso wephupha ulumkisa ukuba umntu kufuneka alazi ikamva lakhe.